Lithini ibali elingemva kwelogo yeLego? Abadali be-Intanethi
Ngubani ongalaziyo uphawu lwe-LEGO? Kulula kuye nabani na kuthi ukuba neenkumbulo zezi zinto zokudlala ezithi qatha engqondweni. Kwaye kukuba, uphawu luye lwakhapha izizukulwana ezahlukeneyo, abaye badlala ngezi ziqwenga zokwakha, ukudala ihlabathi fantastic, ixesha elide.
I-brand ye-LEGO iyaziwa kuyo yonke indawo, kodwa ayinguye wonke umntu owaziyo ukuba ibe njani i-brand eqhubekayo ibe yi-benchmark kwimidlalo yokwakha, ngoko kule mpapasho siza kufunda malunga nokuvela kwayo. Siza kuthetha ngembali yelogo ye-LEGO kunye nayo yonke into eyingqongileyo.
Njengoko sisazi, impumelelo ye-brand ixhomekeke kwizinto ezininzi, kodwa enye yezona zinto zibalulekileyo ngokwemigaqo yaloo mpumelelo, yi logo. Le nto yoyilo inokuba yiyo emisela impumelelo okanye ukusilela kophawu.
1 imbali yelego
2 Imbali yelogo ye-LEGO
Zingaphi iiyure esizichithe sidlala ngeebhloko ze-LEGO, akunakwenzeka ukubala ngokufanelekileyo. Enye yezona zinto zintle zophawu kukuba uye wakwazi ukunyamezela ngokuhamba kwexesha, kwaye akukhathaliseki ukuba ungakanani ubudala okanye ukuba ungumthandi we-LEGO, awusoze uyeke ukwenza enye yeemeko zayo.
I-LEGOs ngumlutha kunye nomngeni, kwingqondo yethu, kuba unako Yakha inani labalinganiswa okanye iimeko ezizezinye. Ukusuka kumaqhawe amakhulu, i-Adidas sneakers, ibala lezemidlalo laseBernabéu, i-Diagon Alley yaseHarry Potter, njl.
Imbali ye-LEGO iqala ngonyaka we-1932 eDenmark. Ole Kirk Kristiansen, wavula ishishini elincinci lokuchwela kwidolophu yaseBillund, apho amathoyizi enziwe ngamaplanga, iileli, izitulo, njl. nonyana wakhe oneminyaka eli-12 ubudala.
Imbali yelogo ye-LEGO
Kwakungowe-1934, xa ishishini elincinci lamkela igama le-LEGO. bucala ngasekhohlo Igama livela kwisifinyezo sesiDanish samagama amabini, ichaphaza lomlenze, intsingiselo yokudlala kakuhle.
Kweli nqanaba, kuxa ilogo yokuqala yophawu ityhilwa. Le logo yaba zenziwe kwakhona kwizinto ezahlukeneyo ezifana neengxowa, iimvulophu, izitampu, izincamathelisi, njl. Ayizange ibonakale njengophawu kwizinto zokudlala okanye ezinye iimveliso abazenzileyo.
Njengoko kunokubonwa, yi-a i-logo elula, eyakhiwe nge-typography kunye nomda omnyama, okwenziwa ngokutsha kuye kuphela kumaxwebhu okanye ezinye izinto ezinokuprintwa.
Ngo-1936, i-logo yenza utshintsho lwayo lokuqala kwaye, iqala ukubekwa kwiimveliso abazenzileyo, kwiithoyi zokhuni, kunye nesitywina esishicilelweyo se-LEGO Fabriken Billund.
Ukutyhubela iminyaka, inkampani iye yanda kwaye inkulu, ifikelela kubasebenzi abali-10. Kwaye emva kweminyaka, ubonisa a uyilo olutsha lwelogo, olwalusetyenziswa luphawu lokudlala iminyaka elishumi.
La inguqulelo yokuqala eyaziwayo yombala wophawu, ivela ngo-1946. Ilogo yakhiwe ngohlobo lwe-sans serif yegama le-LEGO kunye nefonti enqamlekileyo yegama le-Klodster.
Phakathi kwe-1949 kunye ne-1950, uphawu lwebhloko luqala ukuvelisa iziqwenga zeplastiki ezidumileyo. Imveliso ababeyivezile yayizezinye ukwakha izitena ezikwaziyo ukudityaniswa kunye nento ababeyibiza ngokuba ziibhloko zokuzibophelela.
Kunyaka kamva, ngo-1951, igama lebrendi liyatshintsha ukusuka kwi-Self-Joining Blocks ukuya I-LEGO Mursten, oku kuthetha ukuba, iibhloko ze-LEGO. Esi sigqibo senziwe ngunyana ka-Ole waza weza noyilo olutsha lwelogo apho umbala obomvu wawungowona ubalaseleyo.
Kwinqanaba le iminyaka engama-50, uphawu lwasebenzisa iilogo ezintathu ngaxeshanye Zazifana, kodwa azifani. Ngamnye kubo wayenegama le-LEGO kwifonti engqindilili, i-sans serif.
Ezimbini kwezi nguqulelo zinegama lebrand ngombala obomvu. ibekwe kwimvelaphi emthubi okanye kumfanekiso. Kwelinye icala, enye inguqulelo yayingoonobumba abantsundu, kumqolo omhlophe.
Embindini Ngoo-50, uphawu lwakhetha ukubandakanya imilo embhoxo thatha igama lebrand. Kweli nqanaba, kuxa ukuchwetheza kwegama le-LEGO kuthatha i-360 degree turn.
I-sans-serif eyayisetyenziswa ngaphambili kwii-typefaces kunye inika indlela kuchwethezo olunenkangeleko ekufutshane nenobubele. Yifonti enemigca egosogoso kunye noonobumba abagqamileyo, abafana kakhulu nohlobo lochwethezo olusetyenziswayo namhlanje.
Kwi logo yeli nqanaba, iqaqambise i-oval ebomvu kumbhalo omnyama, kunye neengongoma ezimbini kwicala ngalinye lale milo, edibaniswe ngumgca othe tye.
Kwiminyaka emihlanu kamva, ngo-1960, imilo embhoxo eyayirhangqe igama lebrendi yatshintshwa yayisikwere. Kule nguqulo, ngaphandle kwegama le-LEGO, igama elithi System livele.
Hayi kude kube Ngo-1973, xa i-logo yadalwa leyo yindawo yokuqala yale nto isetyenziswa luphawu namhlanje. Kule minyaka inkampani iqala ukwenza kunye nokuthengisa kunye ne-United States.
I-LEGO, yamkele a ilogo esemgangathweni ngakumbi, njengoko sesitshilo, ifana kakhulu nale yangoku. Le logo yenziwe ngoonobumba abamhlophe abadweliswe kumnyama kunye notyheli, kwaye yabekwa njenge hayi, kumqolo obomvu oxande.
Kwelinye icala, i i-typography ifana kakhulu naleyo yayisetyenziswa kwiminyaka yama-50s, kodwa ngeli xesha lincinci, linika ukubonakala okutyebileyo, i-bubble ngaphezulu.
Le logo yokugqibela igcinwa kude kube ngunyaka Ngo-1998, apho uhlengahlengiso lokugqibela lwe-brand lwenziwa kwaye eyenza uphawu esilwaziyo namhlanje.. Apho i-typography yenziwe isimbo kwaye inkcazo yoonobumba inkulu.
La indibaniselwano yombala ekhoyo kwi logo ukususela ngo-1960, emhlophe, emnyama, ebomvu kunye netyheli, ngokutsho uphawu, iphefumlelwe uluhlu lwemibala esisiseko ekhoyo kwiibhloko zokwakha imidlalo yayo.
Okwangoku, uphawu luye lwahlala lungatshintshi kumfanekiso walo we-brand, kwaye ukususela ekuqalweni kwayo kuye kwaba yenye yeenkampani eziqinileyo kunye nezigqithisiweyo kwimbali. Luphawu olufunwayo, kokubini ngoyena mncinane wendlu nakubantu abadala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Lithini ibali elingemva kwelogo yeLego?
Imizekelo yencwadana yesazisi yenkampani